Posted on Dai 29, 2020 November 20, 2020 by csr 1688
Pasi rese, vanhu vari kugovana mafoto kubva kuMinnesota Minneapolis iri kusangana neruoko rwekusiyana kwemarudzi uye kirasi. Mune ino kesi kunyanya kumabvazuva kwegungwa.
Kubva kumavhidhiyo efoni kusvika News Anchor kamera varume zvikwata, pane kusarongeka kuri kuitika kwese kwese. Muzuva rino nezera, zvinokurumidza kugovana nyaya kuburikidza nesocial media. Vanhu kwese kwese vari kuratidza kusangana kwavo nekusarongeka munharaunda. Panguva ino, inowanzoonekwa kuburikidza nerufu rwaGeorge Floyd. Zvisinei, izvi hazviregi vasina mhosva vasina kumira. Kusarongeka munharaunda kwave a new normal muAmerica.
Mukadzi mune scooter, kwete a wiricheya, asi zvaigona kuve zviri nyore kuve mu wiricheya, akakuvara nemhirizhonga. Akange ari mune inooneka sikuta iyo yaizotorwa seGiredhi 2 kana 3. Izvi zvinonyanya kuratidza kukosha kufamba kukanganisa kwevakadaro kufamba zvishandiso zveku "kupihwa" kana kutengwa. Enderera kuverenga kuti uone kubatanidzwa kwake.
Isina Kumbopeta Scooter:
Izvo zvakataurwa ne Daily News kuti mukadzi uyu aikuvadza vamwe nemaune.
Mukadzi mukati wiricheya akasundidzirwa, akarova chibhakera nekusaswa nemoto wekudzimisa moto mushure mekupomedzerwa "kubaya vanhu" kunze kwechitoro cheChivavarira muMinneapolis panguva yeChitatu manheru kuratidzira kwakaipa pamusoro pekufa kwaGeorge Floyd.
Nhoroondo dzinopokana pasocial media dzakamutsanangura iye ari maviri se remara mukadzi anga achiedza kuvharira vapambi kuti varege kupaza chitoro uye semhondi ine hukasha yaive nebanga uye ichityisidzira kukuvadza varatidziri.
Mazhinji emavhidhiyo akaratidzirwa pa twitter uye mazhinji mamwe mapepanhau enhau anoratidza mamiriro ekunze. Nekuda kweizvozvo, vanhu vazhinji vakakuvara vakakuvadzwa panguva yemhirizhonga.
Vazhinji vanofamba vasina huremu vanoda wiricheya, scooter, kana mudziyo wekufambisa kazhinji havakwanise kuisa vamwe munjodzi.
Anonzi anga aine chigumbu nemumwe wevashandi ve "African American" muchitoro chemuno. Akabatsira kugadzira nyonganiso panguva yekuratidzira murunyararo. Mhirizhonga yakasimudzirwa nevapambi vakaenda kudhorobha vaine chinangwa chekuba nekuwana kubva pamhirizhonga. Zvinogona kuonekwa muvhidhiyo kuti aive nekukanganisa kwakanyanya naye kufamba kutadza kuburikidza nekuvharirwa kune a sikuta yemagetsi. Kupesana neiyi vhidhiyo. vhidhiyo yakasiyana inoratidza kuti anokwanisa kufamba, zvisinei, hazvina kutsanangurwa kana izvo zvaingova zvenguva pfupi.
Iwe sarudza. Akanga achikuvadza vamwe here?
Anokodzera izvi here?
Kana ari chete kufamba akaremara, akagona kumira here?
Tinofanira here kuva nezwi kudivi rake rengano?
Ndokumbira utumire email pa: editor@karmanhealthcare.com
Ona Mamwe Mavhidhiyo pane iyi nyaya:
[embedyt] https://youtu.be/ltqTUb3cZ68 [/ embedyt]